buluugleey Somali Information Service
Maalinta caafimaadka aduunka oo Muqdisho laga xusay
Maanta oo ku beegneed maalinta caafimaadka aduunka oo ku beegneed ayaa si weyn loogu xusay xarunta isbitalka Banaadir ee Hooyada iyo dhallaanka. Maalintaa oo qaddarin weyn ay siiyeen dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho aya waxaa halkaasi lagu sameeyay damaashaad lagu qadarinayo malinta caafimaadka addunka.
Munaasabad oo si weyn loo soo agaasimay laguna maamuusayay maalinata caafimaadka ayaa waxaa ka soo qeybgalay wasiir-ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda Federaalka KMG Profesoor Cismaan Maxamuud Maxamed (Dufle). Wasiirka oo halkaas ka akhriyay khudbad dheer baa wuxuu sheegay in maalinta caafimaadka loo aqoonsaday maalinta Hooyada iyo Dhallaanka.
Xafladdaasi waxaa agaasinkeeda qeyb weyn ka qaatay Agaasimaha Cusbitaalka Banaadir Dr. C/llaahi Xaashi Kadiye wuxuuna ka hadlay muhimadda caafimaadka u leeyahay aadanaha. Waxaa kaloo ka soo qeyb galay xafladaas xildhibaan Jamaal Xasan Ismaaciil oo ku hadlayey magaca xildhibaanada dowladda Federaalka KMG. Waxaa xafladdaasi ka soo qeyb galay xildhibaano ay ka midka yihiin Macallin Maxamed Maxamuud (Macallin Jiis) iyo Caamir Axmed Jakeyti.
Ugu danbeyntii waxaa munaasabadaas khudbad dheer isna ka akhriyay Dr. Max’ed Xuseen Cumar oo ka socday hay’adda UNICEF.